सबै पीसी प्रयोगकर्ता ढिलो होस् वा पछि कम्प्युटर जम्छ वा तथाकथित को समस्या सामना गर्नेछ "ढिलाइ।" यस्तो अवस्थामा, कम्प्युटर सुस्त र विभिन्न असफलता वा त्रुटिहरू दिन सुरु हुन्छ। कडा भने कम्प्युटर लाइ रोक्छ थाहा छैन सबैलाई, तर हुन सक्छ आंशिक यो समस्या हटाउन। यसको क्षमता पारंपरिक तरिका मा एक महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल गर्न असम्भव छ। यो समस्या समाधान गर्न के कम्प्युटर झुन्डिएको गर्दा? यसको घटक र अपरेटिङ प्रणाली सफा गर्न सजिलो तरिका हो।
कम्प्यूटर भागहरु कसरी सफा गर्ने?
यदि तपाईंको कम्प्युटर प्रतिक्रिया छोड्नुहुन्न पहिलो धूलो यसका भागहरु सफा गर्नुपर्छ। पीसी को मुख्य शत्रु को एक धूलो पनि प्रशंसक र motherboards मा settles छ। यसलाई यसरी आफ्नो गति र कार्यसम्पादन घट्छ, किनभने उनको कम्प्युटर छिटो heats छ। कम्प्युटर भागहरु सफा गर्न, तपाईं सिस्टम एकाइ खोल्ने गर्न आवश्यक छ। यो केवल गरेको छ - पक्ष आवरण हटाइएको छ। यसबाहेक, यो रोगी सानो ब्रश, कान कपास लाठी, आदि हुन र प्रयोग गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ सबै तत्व देखि धूलो सफा। तत्व टांका छन् जो यो विशेष हेरविचार संग धूलो हटाउन आवश्यक छ। तपाईंले कम्तिमा एउटा सानो तत्व, कम्प्युटर दुर्घटनाहरु बनाइदिन भने। को प्रशंसक लागि जाँदा, तिनीहरूले थप सजिलै साफ गर्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई साथै यसलाई विभिन्न पंपों, निर्वात, वा एक हेयर ड्रायर प्रयोग धूलो झटका दूर गर्न सम्भव छ।
के र सञ्चालन प्रणालीको कसरी सफा गर्न के कम्प्युटर हङ?
धूलो आफ्नो पीसी सफाई पछि यो अपरेटिङ सिस्टम सफा गर्न सिफारिस गरिएको छ। सबै भन्दा राम्रो विकल्प सञ्चालन प्रणाली पुन छ, तर सबै प्रयोगकर्ताहरू मौका छ। त्यसैले, सबै भन्दा राम्रो विकल्प संग कम्प्युटर स्क्यान गर्न, र त्यसपछि सफा ccleaner कार्यक्रम छ। दोस्रो कदम हो डिस्क defragmentation। यो गर्न, खोल्न "मेरो कम्प्युटर" र दायाँ कुनै पनि डिस्क defragmentation चयन गर्न क्लिक गर्नुहोस्। यो सबै ड्राइव मा खर्च गर्न आवश्यक छ। जब तपाईं सबै फाइलहरू हार्ड ड्राइभमा प्रदर्शन अप speeding, एक थप अनुकूल स्थानमा राखिएका छन् defragment।
रजिस्ट्री सफाई सञ्चालन प्रणाली को
यो समस्या को likelihood कम गर्न के कम्प्युटर झुन्डिएको गर्दा? यो रजिस्ट्री सफा गर्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ सञ्चालन प्रणाली को। रजिस्टर पुस्तकालयहरु र प्रणाली विकल्प रेकर्ड राखिएको छ। यसलाई सफा गर्न, तपाईं स्वचालित सफाई, जो एक खोज इन्जिन प्रयोग गरेर इन्टरनेट मा पाउन सकिन्छ लागि विशेष कार्यक्रम डाउनलोड गर्न आवश्यक छ। मिति, यी कार्यक्रम धेरै छन्, तर तिनीहरू नै सिद्धान्त मा काम। तपाईं रजिस्ट्री सफा गर्नु अघि, तपाईं यसलाई एक तस्वीर, सिर्फ मामला मा कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण कुरा हटाउने पर्छ। रजिस्ट्री सुरक्षित निम्नानुसार: को "Windows + आर" प्रेस, बक्समा regedit प्रविष्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि एक फाइल नाम निर्यात र एक स्थान चयन गर्नुहोस्।
कम्प्युटर के गर्न Hung, यदि निम्न तरिका समस्या समाधान गर्न पर्याप्त छैन?
को बाट यो पनि सम्भव छ सुरू स्वतः अनावश्यक कार्यक्रम हटाउनु। यो गर्न, "Windows + आर" मा क्लिक गर्नुहोस् र msconfig प्रविष्ट गर्नुहोस्। कि पछि, सुरुवातमा तपाईं अनावश्यक कार्यक्रम अनचेक गर्न, र त्यसपछि सुरक्षित र आफ्नो कम्प्युटर पुनः सुरु गर्न आवश्यक छ।
यो योगदान कारण के भने एक कम्प्यूटर गडबड निर्भर गर्दछ। यो किनभने पीसी सुस्त र बाहिरै गर्न सुरु भएको छ के को पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यी उपाय नामेट एक ठूलो हदसम्म यो समस्या यसको रोकथाम छन्। केही अवस्थामा तिनीहरूले कम्प्युटर झुन्डियो हटाउन मदत गर्न सक्छ। यो स्वतन्त्र प्रयासहरू मर्मत गर्न भनेर सम्झना गर्न आवश्यक सधैं छ हुनत पीसी यसलाई पूर्ण अक्षम गर्न सक्छन्। त्यसैले, यो विश्वसनीय व्यवसायीक मदत खोज्न सबै भन्दा राम्रो छ।
एउटा स्क्यानर के हो
तपाईंको मुद्रक कसरी जडान गर्न
राउटर स्वतन्त्र विकल्प
प्रोसेसर को उच्च तापमान: कसरी आफूलाई कम?
Buttress। कि के हो?
एक बल मा एक केटा को लागि हामी एक केक तयार
घर मा आफ्नो कोलेस्ट्रल कसरी कम गर्ने? कार्य गर्न मार्गदर्शन
ड्राई प्लास्टर - यो Drywall निर्माण
जानकारीमूलक मूल्य ट्याग वृद्धि बिक्री
बिरामी छुट्टीको सम्बन्धमा छुट्टीको विस्तार। बिरामीको अवधिको लागि छोडको विस्तार